Dhammaan ciyaaraha Google, oo ay ku jiraan dinosaurka quraafaadka ah | Madasha Mobile -ka
Dhammaan ciyaaraha Google, oo ay ku jiraan dinosaurka khuraafaadka ah
Cristian Garcia | 10/10/2021 17:13 | La cusbooneysiiyay 10/10/2021 17:15 | Google Chrome
Miyaad u malaysay inuu jiro kaliya dinosaurka caanka ah ee Google? Waa hagaag maya, mashiinka wax lagu raadiyo oo lagu sameeyay dhammaan bilawgii daalacayaasha Internetka ee aan ku haysanno kombiyuutarradayada xulashada ciyaaraha Google oo dad badani aysan ka aqoon. Laakiin waan samaynaa, oo waxaan kuu sheegi doonnaa wax ku saabsan cayaarahooda si haddii aad mar uun u caajiso, aad isku daydo. Waxaad ka heli kartaa labadaba mashiinka raadinta laftiisa iyo Doodle waxaadna ka ciyaari kartaa kombuyuutarkaaga iyo taleefankaaga gacanta labadaba.
Ciyaaraha carruurta ugu fiican ee onlaynka ah, ammaan ah oo bilaash ah
Waan kuu sharxi doonaa sida loogu ciyaaro cayaarahaan google habka ugu fudud sidoo kale waxaan kuu sheegi doonnaa mid walba waxa uu ku saabsan yahay si haddii aad u dareento, aad u gasho oo aad u ciyaarto ciyaaro qaar waqti kasta. Sababtoo ah yaa aan ku ciyaarin dinosaurka Google kulliyadda ama shaqada maxaa yeelay gebi ahaanba wuu caajisay! Hagaag hadda waxaad ogaan doontaa inay jiraan kuwo kale oo badan oo ka baxsan, dinosaurka kaligiis ma aha. Sababtaas awgeed, iyo sababta oo ah dhammaanteen waxaan nahay ciyaartoy iyo in ka badan xilliyada caajiska, waxaan halkaas kula tagnaa liiska cayaaraha uu Google ku bixiyo bilaash.
1 Ciyaaraha Google gabi ahaanba waa bilaash mashiinka raadinta laftiisa
1.3 Pac Pac
1.5 Zerg deg deg
1.7 Tuur shilimaad
1.8 Daruuraha Google
Ciyaaraha Google gabi ahaanba waa bilaash mashiinka raadinta laftiisa
Sidii aan nidhi, si aad u hesho cayaarahan fiidiyaha waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad fuliso raadinta fudud ee mashiinka raadinta ee Google. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dhigto magaca ciyaarta fiidiyaha iyo gadaasha Google waxay u muuqan doontaa inay ku qoran tahay Google Play, taas oo ay tahay inaadan ku khaldin Dukaanka Google Play, maadaama ay sidoo kale u muuqan doonto sidii ay ka timid shirkadda lafteeda.
Hab kale oo iyaga loogu ciyaaro waa in lagu qoro ciyaaraha Google mashiinka raadinta. Bogga rasmiga ah ee Google ayaa ka soo muuqan doona halkaas oo aad ku arki doonto inay jirto ikhtiyaar kuu geyn doona bog kale. Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa dhammaan doodaha uu lahaa sidoo kale waxaad ka heli doontaa dhammaan cayaarihiisii. Sidaa darteed waxaad hore u taqaanay siyaabo kala duwan oo lagu galo. Mid toos ah iyo mid kale oo qoto dheer, waxay kuxirantahay deg -deggaaga iyo caajiskaaga, waxaad samayn kartaa mid ama mid kale si aad u tagto ciyaaraha ay bixiso mashiinka raadinta.
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu hagaajin karo ciyaaraha Windows
Ma jiraan wax intaa ka badan oo laga sheego habka loo helo iyaga maadaama ay tahay si la mid ah haddii aad isticmaaleyso aaladda gacanta ama kombiyuutar ama laptop, sidaa darteed, waxaan halkaas kula tagnaa liiska ciyaaraha bilaashka ah ee aad ka heli doonto mashiinka raadinta caanka ah ee Google.
Zerg deg deg
Kuwan waxaa dheer, kuwaas oo ah kuwa go'an oo hadda aan kuu sharxi doonno sida ay yihiin, waxay leedahay takhasusyada kale ee doodle xilliyeedka kuwaas oo laga yaabo in sidoo kale laga heli karo mareegtooda oo aan kor ku soo sheegnay. Ciyaarahan ayaa ah kuwa soo socda:
Maalinta Hooyada 2020
Akadeemiyada Magic Cat
Ghoul Duel weyn
Kubadda Cagta 2012
Kubbadda Koleyga 2012
Doontii doonta ee slalom 2012
Sanad guuradii 50aad Dhakhtar Yaa
Sanad guuradii 155aad ee Pony Express
Sidaad arki karto, soosaarayaasha mashiinka raadinta badiyaa waxay sameeyaan waxyaabo gaar ah maalin kale ama mid lagu muujiyey jadwalka. Laakiin hadda, waxaan kuu sharxi doonnaa mid kasta oo ka mid ah cayaaraha ku jira kooxda horyaalka ee ciyaaraha Google. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxaad hore u ogaan doontaa waxay ku saabsan yihiin maxaa yeelay waa ciyaaro caadi ah, xitaa qaar ka mid ah xarfaha. Kuwo kale ayaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwo caadi ah, waana sababtaas, aan raacno.
Waxaad gali kartaa adigoo cidlo ah Kali kali gudaha Google. Waa ciyaarta kaarka caadiga ah ee nolosha oo aad sidoo kale ka heli karto kombiyuutarkaaga. Ciyaarta fiidiyaha ayaa kuu leh laba heer, mid sahlan iyo mid adag. Waxa ka duwan Windows solitaire haddii aad la yaabban tahay sababta aan u isticmaalayo Google ee aan u adeegsanayn kombiyuutarkayga, waa in aysan jirin dariiqa loo maro in la dhigo kaararka adigoo laba jeer gujinaya, waa inaad u jiidaa meesha aad rabto ka tag. Waxaad ka ciyaari kartaa Google solitaire biraawsarka, sidaa darteed waxaad ka gali kartaa taleefankaaga gacanta haddii aad rabto.
Ciyaartan waxaad ka heli doontaa iyadoo raadineysa Tic tac sue: mashiinka raadinta. Waa astaan ​​kale oo nololeed. Ma yeelan doontid heerar dhib badan oo ikhtiyaarka ugu horreeya ee ay ku siin doonto waa inaad ku ciyaarto Xs ama O. Markaa waa inaad riixdaa si aad u garaacdo mashiinka. Sida tii hore oo kale, waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa taleefankaaga gacanta dhibaato la'aan.
Waxay u muuqataa inaan ku sii wadno qadiimooyinka laga soo bilaabo xilli kale. Si aad u ciyaarto Pac Man waa inaad isticmaashaa ereyada Pac Man: gudaha Google. Waa ciyaarta fiidiyaha caadiga ah ee calaamadisay xilli, astaan. Waxaad ku ciyaari kartaa kiiboodhkaaga adigoo isticmaalaya fallaadhaha kor, hoos, midig iyo bidix. Sida tii hore oo kale, waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa taleefankaaga gacanta dhibaato la'aan. Xaaladdan oo kale waa inaad fartaada u leexisaa dhinaca aad rabto inaad tagto.
Ciyaartii hore ee caanka ahayd ee fiidiyowga Nokia ayaa iyaduna ku jirta Google. Waxaad ka heli kartaa adiga oo raadinaya Mas:. Ciyaarta fiidiyowgu waxay ka kooban tahay cunista tufaaxa iyo in masku sii dheeraado oo uusan ka fogaan karin caqabadaha nolosha qaada ilaa ay ku dilaan. Ciyaar fiidyow oo balwad leh. Sida tii hore oo kale, waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa taleefankaaga gacanta dhibaato la'aan. Waxa kale oo lagaa rabaa inaad siibto fartaada.
Waad heli kartaa adeegsiga raadinta Zerg Rush:. Ciyaarta fiidiyaha ayaa ah in goobo kala duwan oo wata xarafka O ee Google ay ku sii socdaan biraawsarka waana inaad gujisaa si aad u disho. Sida tii hore oo kale, waxaad sidoo kale ka ciyaari kartaa taleefankaaga gacanta dhibaato la'aan.
Si aad u gasho waa inaad baartid Atari Breakout:, laakiin markan laga soo qaaday qaybta sawirada Google. Waa inaad jabisaa baloogyada adigoon u oggolaan inay kubaddu baxsato oo soo booddo. Xaaladdan waxaad ku ciyaari kartaa oo keliya PC.
Si aad u hesho waa inaad hel Flip a Coin. Ma aha inay tahay ciyaar sidaas oo kale ah, laakiin waa caadi inaad saaxiib wax la go'aansato. Waxaad si fudud u rogi doontaa qadaadiic waxayna soo bixi doontaa madaxyo ama dabo.
Si aad u hesho waa inaad gal abka moobilka Google. Markaad gudaha gasho waa inaad gelisaa habka diyaaradda oo aadan lahayn xiriir. Markaad wax ka raadsato barnaamijka Google, waxaad arki doontaa xumbo leh ciyaarta fiidiyaha. Ciyaar aad u yaab badan laakiin mudan in la isku dayo sirteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Google Chrome » Dhammaan ciyaaraha Google, oo ay ku jiraan dinosaurka khuraafaadka ah
Sida kooxaha Telegram u shaqeeyaan iyo sida loo sameeyo mid